Guddiyo ka socday wasaaradda arimaha Gudaha iyo Barlamaanka Somalia oo kulmay – Radio Daljir
Maajo 10, 2015 2:18 b 0
Axad May 10, 2015 (Daljir) — Wasiirka wasaarradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo uu weheliyey kuxigeenkiisa ayaa kulan laqaatay gudiga arrimaha gudaha ee barlamaanka wadanka Soomaaliya.
Muhiimadda ugu weyn ee Kulanka ayaa waxaa ka mid ah dhismaha maamul goboleedyada dalka, Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalalka Kenya iyo Yemen iyo dooda la xiriirta in Kenya ay darbi ka dhisaneyso xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto, waxaana u kuurgelidda arrintaasi uu guddi u xilsaaray.Wasiirka.
Labada wasiir ayaa xubnaha gudiga arrimaha gudaha ee barlamaanka Jmahuuriyadda federalka ah ee Soomaaliya ka dhegeystey su’aalo kala duwan oo shaqadooda laxiriira kadibna uga jawaabay, waxaana sidoo kale ay ka codsadeen lashaqaynta gudiyo dhowaan ay magacaabeen.
Xildhibaan Daahir Aamiin Jeesow gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha ee barlamaanka Soomaaliya oo warbaahinta lahadlay kadib kulanka ayaa sheegay in kulamada noocaan oo kale ah ay yihiin kuwa koruqaadaya wadashaqaynta barlamaanka iyo xukuumadda ayna joogtayn doonaan.
Wasiirka Arrimaha gudaha Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa tilmaamay in kulanka uu la xiriiro waxyaabaha u qabsoomay Wasaaradda mudadii uu xilka wasaaraddaasi hayey iyo qorshayaasha xilligaan ay maagan yihiin ka wasaaradda ahaan.